Nestlé NaturNes Bio Pear 90gr - Chitoro cheASFO
Nestlé NaturNes Bio Pear 90gr
Save € 0,35
NaturNes Bio Pera inzira inoshanda yekuunza chibereko chemwana wako kwese kwese. Inokodzera vacheche kubva pamwedzi mina uye mune yega fomati 4g, ine michero yeakaberekerwa mavambo, akakura uye akasarudzika kunyanya kudyiswa kwevacheche.
Iyo huru sarudzo yekutanga kuunzwa kwemichero pakudyisa kwevacheche uye iyo packet fomati inokutendera iwe kuti uende nayo kwese kwese. Iko kurongedza kwakagadzirirwa zvakanyanya kukurudzira vacheche vakura kuti vadzidze kudya michero voga kubva mupaketi. Yakagadzirwa neye organic michero giredhi, yakakura uye yakasarudzika yakasarudzika yekudyisa kwevacheche uye isina mavara ekugadzira kana zvinodzivirira *.
Iyo packet inzira yakaenzana uye inoshanda yekuendesa mabhenefiti emichero kumwana wako, chero nguva chero kupi. Iine 100% michero isina kuwedzerwa shuga, iine chete mashuga anowanzoitika. Muhomwe yega yega NaturNes Bio yakaenzana neicho chinoshumirwa chemichero, ichipa iko kwakanyorovera uye dhizaini inonaka yekugutsa marati anonzwisisa zvakanyanya!
Nekuzvipira kupa zvigadzirwa zveyakazvarwa mavambo, akagadzirwa michero yeMucheche NaturNes Bio Pear, yakagadzirwa nepari puree, 100% yehupenyu mavambo.
Haisi chete yezvakaberekwa, mwana wekubereka.
- Chibereko che100% kwayakatangira.
- chibereko chekutanga chemhando yepamusoro, kunyanya chakasimwa uye chakasarudzwa pakudyisa vacheche.
- Hapana akawedzera shuga. Inongova neshuga dzinongoitika zvega muchero.
- Hapana dhayi kana zvinochengetedza kana zvekunakisa zvekugadzira.
- Smart Kuyerera TM & ndash; Iyo nyowani nyowani inodzora kuburitsa rwizi, ichibvumira yakakura kuzvitonga uye kuvimba kune mwana wako.